Eliana Bezaza : « Mihazakazaka hangala-bato ny Mapar » -
AccueilSongandinaEliana Bezaza : « Mihazakazaka hangala-bato ny Mapar »
Eliana Bezaza : « Mihazakazaka hangala-bato ny Mapar »
08/06/2018 admintriatra Songandina 0
Tsy ampihambahambana no nanambaran’ny sekretera nasionalin’ny antoko Parti Social-Démocrate na PSD, Eliana Marie Bezaza, fa “mihazakazaka hangala-bato amin’ny fifidianana ny Mapar”.
Voalaza fa efa mifandrirotra amin’ny ady seza amin’ilay governemantan’ny marimaritra iraisana mantsy ireo olon’ny Mapar ankehitriny. “Milaza fa mitolona ho an’ny fanovana ireo solombavambahoaka etsy Analakely, izay ny avy amin’ny Mapar no betsaka. Izy ireo no milaza fa azy ilay praiminisitra vao notendrena, Ntsay Christian. Noho izany, tsy maintsy izy ireo no hibaiko sy hanao an-tery amin’ny fanendrena minisitra amin’izay metimety amin’izy ireo, ahafahany mangala-bato amin’ny fifidianana”, hoy ity sekretera nasionalin’ny PSD ity.
Ankoatra izay, raha ny tsilian-tsofina mantsy, dia miady ny handrombaka avy hatrany ny minisiteran’ny Atitany ny avy amin’ny Mapar satria ao indrindra no ahafahan’izy ireo mangala-bato amin’ny fifidianana. Ny praiminisitra rahateo efa tratran’ny an-tery hatramin’ny nanendrena azy sy nanomboka taorian’ny fifamindram-pahefana amin’ny tsy maintsy handraisana ny olon’ny Mapar ho manodidina azy eny amin’ny Lapan’ny Mahazoarivo.
Izany rehetra izany no mampanahy ny besinimaro ankehitriny, satria dia hifandrirotra amin’ny ady seza hatrany ry Mapar. Mihevitra ny hamerina ny gaboraraka tamin’ny fitondrana Tetezamita mandritra ny fitantanan’ny governemantan’ny marimaritra iraisana, sns.
Ravalomanana mivady : Mamaky ady amin’Antananarivo
Ho ben’ny tanàn’Antanarivo renivohitra no nifidianan’ny vahoakan’Antananarivo an’i Lalao Ravalomanana fa tsy hamelona ny antoko Tim hanomana fifidianana. Ankehitriny mantsy dia lasa manatevin-daharana manampy an-drangahy vadiny amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana sisa no ataon’ity ben’ny ...Tohiny
Vietnam:TAFAPETRAKA NY MASOIVOHO
Solombavambahoakan’i Madagasikara : Manohana ny vina « Fisandratana 2030 »
Hery Rajaonarimampianina : Mitohy ny asa fanarenana na dia eo aza ny savorovoro politika